Phonesites: Mamorona tranokalan'ny Sales Funnel sy Pejy Famoahana ao anatin'ny minitra Mampiasa ny findainao | Martech Zone
Mety hahatezitra ny olona sasany ao amin'ny indostriako izany, saingy orinasa maro no tsy manana modely manohana ny fampiasam-bola amin'ny fametrahana tranokala goavana sy paikady momba ny varotra votoaty. Mahafantatra orinasa madinika vitsivitsy aho izay mbola mandeha isan-trano na miankina amin'ny teny am-bava hanohanana orinasa manaitra.
Phonesites: Alefaso ao anatin'ny minitra vitsy ny pejy
Ny orinasa tsirairay dia tsy maintsy mandanjalanja ny fotoana, ny ezaka ary ny fampiasam-bolan'ny tompony mba hamokarana ny fizotran'ny varotra mahomby indrindra mba hampidirana orinasa vaovao. Indraindray, ny fampiasam-bola amin'ny tranokala iray dia tsotra toy ny maka sehatra iray ary mametraka pejy fipetrahana madio, tsotra, mora raisina ary azo atao tsara. Izany indrindra Phonesites dia ho an'ny…
Mifidiana môdely na manomboka amin'ny voalohany. Apetraka amin'ny kitika 2 ny maodely efa vita.
Manomboka manangana pejy amin'ny alalan'ny fampidirana lahatsoratra, sary ary horonan-tsary miaraka amin'ny tonian-dahatsoratry ny drag-and-drop mora.
Marika ny tranokala mampiasa ny sehatra mahazatra anao ary ampidiro ny sehatra misy antoko fahatelo ampiasainao.
Mametraha valiny mandeha ho azy miaraka amin'ny mailaka na SMS fanaraha-maso.
Ampitomboy ny fahafahanao amin'ny alàlan'ny dokam-barotra sy dika mitovy amin'ny AI.
Ny Phonesites dia manambatra ny maodely matanjaka, ny fanangonana angon-drakitra ary ny atiny entin'ny AI mba hanampiana ireo orinasa na masoivoho hamoaka vohikala atosiky ny varotra be fiovam-po ao anatin'ny minitra.
Phonesites dia nanampy orinasa maherin'ny 10,000 namokatra fitarihana 1 tapitrisa mahery ary nanova izany ho fidiram-bola an-tapitrisany. Phonesites dia tranokala tsy misy fanaintainana & mpanorina pejy fipetrahana izay hahatonga anao hiteraka fitarihana bebe kokoa, mpanjifa bebe kokoa ary fivarotana bebe kokoa. Ny Phonesites dia ahafahan'ny orinasa madinika sy masoivoho:
Pejy fanokafana ao anatin'ny minitra amin'ny fitaovana rehetra. Ny mpanorina ny tranokalan'izy ireo dia manasongadina maodely efa namboarina mialoha, miovaova be azonao ampiasaina hanamboarana ny tranokalanao ao anatin'ny minitra vitsy.
Angony mitarika ary ny fanendrena boky. Manangana pejy tsotra izay mitari-dalana ny mpitsidika amin'ny fizotran'ny varotrao tsikelikely sady manangona angon-drakitra miaraka amin'ny lalana ahafahanao manaraka.
Mamorona atiny – Azonao atao ny mamorona dika mitovy amin'ny varotra avo lenta ao anatin'ny tsindry vitsivitsy monja miaraka amin'ny Mpanoratra AI an'ny Phonesite.
Fanaraha-maso mailaka - Tsy mila programa mailaka, ny rafitra mailaka naorina ao amin'ny Phonesites dia mamela anao handefa fanaraha-maso ho azy.
Mahazoa fanampiana - Midira ao amin'ny ekipa manam-pahaizana hanampy amin'ny antso stratejika 1-on-1, chat mivantana, vondrom-piarahamonina tsy miankina ary atrikasa isan-kerinandro.
Izay rafitra fitantanana votoaty (CMS) requires integration capabilities to enhance and add-on features and functionality. Phonesites is no different, with productized integrations to Zapier, MailChimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Facebook Ads, Google Analytics, Hotjar, Calendly, and more.
Atombohy ny fitsapana amin'ny tranokalan-telefaona maimaim-poana
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Phonesites ary ampiasaiko ny rohy mpampifandray ahy ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: kalandriehisintona ary mandatsaka tonian-dahatsoratrafacebook adstenyGoogle AnalyticsGoogle ReCaptchahotjarmpamorona tranonkala pejy fipetrahanapejy pejyfanangonana firakamailchimpphonesitesendrika varotrampanorina ny fantson-kitaytranokala fivarotana varotramivatraTwilioVimeoWebsite MpanorinaYouTubezapier